Hero Photon – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
ကို 85 ကီလိုမီတာ (45 km/h)
ကို 110 ကီလိုမီတာ (25 km/h)
အဆိုပါဖိုတွန်အိန္ဒိယကနေ mobility ဖြေရှင်းချက်ပေးသူတစ်ဦးထံမှလျှပ်စစ် Scooter ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 1956 ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းနှင့်မကြာသေးမီကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့ပယ်ပတ်ချာလည်ထားပြီးကို e-စက်ဘီးနှင့်ဆိုင်ကယ်အပါအဝင်ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ mobility ဖြေရှင်းချက်မှဆက်ကပ်အပ်နှံကြောင်း HERO ECO အမည်ရှိစုရုံး။
အိန္ဒိယ 2018. နောက်တစ်နေ့အကြီးမားဆုံးစျေးကွက်များတွင်ပိုမိုထက် 19 သန်းရောင်းအားနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုင်ကယ်များအတွက်အကြီးမားဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်တယ်, တရုတ်, အိန္ဒိယက 2030 လျှပ်စစ်မှဆိုင်ကယ်များ၏ရောင်းအားကန့်သတ်ရန်စလေိုကွောငျးကြေညာလိုက်ပါတယ် 2018. 17 သန်းပေါင်းများစွာဆိုင်ကယ်ရောင်းချခဲ့သည်။ သူရဲကောင်းလျှပ်စစ်အိန္ဒိယတွင်လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်များအတွက်ပထမဦးဆုံးရှေ့ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါဖိုတွန်တစ်ဦးကိုနောက်မျိုးဆက် Scooter ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုမောင်းနှင်မှု Modes သာထောက်ပံ့: ပါဝါနှင့် Eco ။
အဆိုပါ Scooter 45 km / h ၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းများအတွက် 1500 ဝပ်လျှပ်စစ်မော်တာရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter ပါဝါ mode မှာ ECO mode နဲ့ 85km အတွက် 110 ကီလိုမီတာတစ်မောင်းနှင်မှုအကွာအဝေး 28 Ah ကတစ်စွမ်းရည်နှင့်အတူတစ်လီသီယမ်ဘက်ထရီရှိပါတယ်။ ဘက်ထရီ၏တာဝန်ခံအချိန် 4-5 နာရီကြာသည်။
အဆိုပါ Scooter ဆန့်ကျင်ခိုးယူမှုစနစ်နှင့်အတူတစ်ဦးဝေးလံသောသော့ခတ်ထားပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter ဘက်ထရီအခြေအနေနှင့်မြန်နှုန်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒိုင်ခွက်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter အိန္ဒိယတွင် 500 ကျော်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်မှာအမိန့်ချမှတ်နိုင်ပါသည်။ သွင်းကုန်ကနေတဆင့်ဖြစ်နိုင်သည် www.uship.com ။
ကို 2020 Hero Electric ကိုမော်ဒယ်များ
Hero Electric ဆိုင်ကယ်အားလုံးကို filter ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွင်ကြည့်ပါ။